काँग्रेस १४औँ महाधिवेशनः ६० जिल्लाका १४८ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन हुदै
काँग्रेस १४औँ महाधिवेशनः ६० जिल्लाका १४८ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन हुदै महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि आजै चयन हुने
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले १४औँ महाधिवेशन अन्तर्गत आज ६० जिल्लामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन गर्दै छ । काँग्रेसले ६० जिल्लाका १४८ वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन आजबाट सुरु गर्न लागेको हो ।
काँग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव यादवका अनुसार १४ वटा जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ भने आज ६० जिल्लामा अधिवेशन हुन लागेको हो । उनले ६० जिल्लाको १४८ वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा आजबाट अधिवेशन सुरु हुनलागेको बताए । विवादक सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा भने अधिवेशन प्रक्रिया रोकिएको छ । उक्त जिल्लाको विवाद समाधानका लागि महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीच छलफल भएको थियो ।
आज प्रतिनिधिसभा क्षेत्र र एक निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन पनि हुने काँग्रेसले जनाएको छ । मंसिर १० गते एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन हुने उसले जनाएको छ । आज ती जिल्लामा केन्द्रीय महाधिवेशनका मतदाता महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि चयन गरिने छ । वडा अधिवेशनबाट चुनिएका क्षेत्रीय प्रतिनिधिले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको नेतृत्व र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनका लागि मतदान गर्ने छन् । आज महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुने भएकाले अधिकांश केन्द्रीय नेताहरु गृह जिल्लामा पुगेका छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ६, २०७८, ०७:१८:००